10 waxyaabood oo la sameyn karo oo leh qaabka qabowga
Shirkadda Samsung S Pen waxay ka badan tahay taakulaynta inaad ku xayeysiiso amarrada shaashadda. Dhab ahaantii, S Pen ayaa hadda aad u awood u leh in lagaa cafiyo oo aadan ogeyn dhammaan wixii ay qaban karto. Halkan waxaa ah isticmaalka loogu talagalay Samsung S Pen aan jecel nahay.
Adeegsiga S Pen Air Command
Taliska S Pen Air waa xaruntii taliska ee stylus . Haddii aysan horeyba u awoodin telefoonkaaga, hadda awood. Halkan waa sida:
Fiiri astaanta amaanka ee u muuqda dhinaca dhinaca midig ee shaashadda markaad ka saarto S Pen. Waxaad ogaan doontaa in badhanka uusan feysha ku shaqeyn doonin. Waa inaad isticmaasho S Pen si aad u taabato.
Marka uu furmayo Howlaha Howlaha Cimilada, ku dheji icon yarta qaybta hoose ee shaashadda si aad u furto Goobaha .
Ku dhaji qaybta Qalabka ee liiska soo baxaya oo isticmaal S Pen ama fartaada si aad u ogaato Marka S Pen laga saaro.
Muuqaal cusub ayaa ka muuqda seddex doorasho:
Amarka furan ee hawada.
Waxba ha sameyn.
Xulo Amarka Furan ee Furan.
Marka xigta ee aad ka soo baxdo Qalinka S, waxaad si toos ah u furi doontaa Amarka Hawada. Waxaad sidoo kale riixi kartaa oo ku hayn kartaa badhanka dhinaca qaybta S Pen markaad u dhexeyso caarada qalinkaaga shaashadda si aad u furto liiska.
Muujintani waa xarunta xakamaynta. Waxay ku kala duwanaan kartaa aaladda, laakiin barnaamijyada kartida ah ee la ogolyahay waxaa ka mid noqon kara:
Qoraal sawir ah
Waxaad awood u yeelan kartaa barnaamijyo dheeraad ah adoo ku xayiraya astaanta + barnaamijka "Air Command menu". Markaa waxaad kuxiran kartaa barnaamijyadan adigoo ku sawiraya xariijinta hareeraha hareeraha astaanta hawada.
Waxaad sidoo kale riixi kartaa hana qabataa astaanta hawada oo leh calaamadda S Pen intiidhka illaa ay ka madoobaato in ay u wareegto shaashadda haddii aad aragto in meesha ay ku taal ee shaashadda ay ka muuqato.
Xusuusin degdeg ah oo la socota xusuus-qoryada furan
Mid ka mid ah muuqaalka wanaagsan ee isticmaalka S Pen waa awoodda Screen Off Memo. Iyadoo Screen Off Memo awood u leedahay, uma baahnid inaad furto qalabkaaga si aad u sameyso qoraal degdeg ah.
Si fudud uga saar S Pen ka mid ah. Barnaamijka "Screen Off Memo" wuxuu si toos ah u bilaabmayaa, waxaadna bilaabi kartaa inaad ku qorto shaashadda. Markaad dhameysid, riix batoonka Guriga iyo xasuusintaada waxaa lagu keydiyaa Samsung Notes.
Si aad u awooddo Screen Off Memo:
Ku calaamadee astaanta hawada ee S Pen.
Xulo astaanta goobaha hoose ee geeska bidix ee shaashadda.
Ku dheji shaashadda shaashadda.
Waxaad xakameyn kartaa qaar ka mid ah sifooyinka qalinka leh saddexda qaybood ee geeska sare ee bidix ee bogga:
Qalbig : Iskudar dhumucda xariiqda qalinka.
Eraser : Dooro inaad wax ka tiriso qoraalka aad abuureyso.
Riix Pin : Dhagsii si aad u dhajiso qoraalkaaga Mar walba Sawirka.
Ku dir Farriin Fariin ah
Farriimaha Live waa mid ka mid ah qaababka ugu casriyaysan oo ay suurta gashay S Pen. Isticmaalida muuqaalkan, waad isku dari kartaa inaad sameyso GIF-yada qabow si aad ula wadaagto asxaabtaada.
Si aad u isticmaashid Fariimaha Live:
Dooro fariin joogta ah.
Daaqadda Live Live ayaa la furaa meesha aad ka abuuri kartid sawirkaaga.
Saddex santoon oo ku yaal geeska bidix ee sare ee app ayaa kuu oggolaanaya inaad xakameyso qaar ka mid ah sifooyinka farriinta:
Saameynaha Qalabka : Dooro khad toosan, khadad iftiin leh, ama khadad dhalaalaya.
Xajka qadarka : Beddel xajinta khadka qalinka.
Midabka : Dooro midabka aad rabto inaad isticmaasho qalinka qalinka.
Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa asalka midabka adag oo sawir leh adigoo isticmaalaya sawirka . Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad doorato mid ka mid ah dhowr midab oo adag ama inaad doorato muuqaal kaaga soo galaya sawirkaaga.
Tarjun Luqadaha leh Samsung Stylus Pen
Marka aad dooratid ikhtiyaar Turjubaanka ka ah Ammaanka Air Command, wax macquul ah ayaa dhacaya. Waxaad ku dhejin kartaa qalabkaaga Samsung si aad uga turjumayso luqad kale. Tani waa mid faa'iido leh haddii aad eegayso website ama dukumiinti ku qoran luqad kale.
Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inaad turjumto afkaaga hooyo luqad aad isku dayeyso inaad baratid (Ingiriisi Isbaanish ama Isbanishka ilaa Ingiriisi).
Markaad hayso qalinkaaga ereyga si aad u aragto tarjumaadda, waxaad sidoo kale yeelan doontaa ikhtiyaarka ah inaad maqasho ereyga ku qoran foomka. Si aad u maqasho hadalka, kaliya ku dhufo icon-yare kooban ee ku xiga tarjumaadda. Ku dhejinta ereyga la tarjumay ayaa sidoo kale kuu geyn doona Google Translates halkaas oo aad wax ka baran karto isticmaalka ereyga.
S Pen Qaadku wuxuu soo saaraa Webka fudud
Markaad isticmaashid S Pen, waxaad ku faafin kartaa shabakad aad u fudud. Gaar ahaan markaad la kulanto websaydh aan lahayn hannaan mobile ama uusan si fiican u qaabeyn qaabka mobile.
Waxaad had iyo jeer arki kartaa qaabka desktop-ka ee bogga oo isticmaali kara S Pen adiga oo keli ah.
Si aad u muujisid erey ama weedho, ku dheji calaamadda S Pen shaashadda. Kadib, markaad jiido qalinka, waxaad nuqul ka dhigi kartaa adoo isticmaalaya jiir. Waxaad sidoo kale riixi kartaa adigoo riixaya badhanka dhinaca dhinaca S Pen markaad ficil sameyneyso.
Qalabka S-Dhexe wuxuu u yahay Magnifier
Mararka qaarkood fiiro gaar ah oo ku saabsan shaashadda yar ayaa adkaan karta. Haddii aad rabto inaad si dhow u eegto waa inaad joojisaa inaad ballaariso bogga. Waxaa jira hab sahlan.
Ka dooro Magnify- ka Ammaanka Caamka Hawada si aad u isticmaasho S Pen sida kor uqaade.
Markaad furato, waxaad ka helaysaa koontaroolka dhinaca sare ee kuu ogolaanaya inaad kordhiso koritaanka. Markaad dhammaysato, waxaad ku xiri kartaa X si aad u xirto balaariyaha.
Barnaamijyada Kale ee Aragga
Falanqaynta waa qaab muuqaal ah oo kuu ogolaanaya inaad dib ugu soo guurto adigoo u dhaxeeya barnaamijyada sahlan. Markaad taabatid Glance ee Ammaanka Air Command ka codsiga furan, app wuxuu noqonayaa shaashad yar oo hoose ee dhinaca midigta hoose.
Markaad rabto inaad mar kale arjigan aragta, ku celi qalinkaaga shaashadda yar. Waxay kordhineysaa cabbirka buuxa mar labaadna dib ayuu hoos ugu dhici doonaa markaad u guurtid S Pen.
Markaad sameyso, kaliya riix oo hayso astaanta illaa iyo inta soo baxa qashin-qubka ka dibna ku jiido qashinka. Ha walwalin, inkastoo. Appkaaga waa weli meeshii ay noqon lahayd; kaliya horudhac horudhac ayaa tagay.
Si toos ah ugu qorto Sawirada Sawirada leh Sawirada Qoraalka
Qoraal Sawir ah waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu faa'iidada leh ee qabashada sawirada iyo qoraallada. Laga soo bilaabo app kasta ama dukumeentiga qalabkaaga, isticmaal qalabkaaga S si aad u dooratid "Screen Write" ka ah Ammaanka Hawada.
Sawir-shaashad si toos ah ayaa loo xiray bogga aad ku jirto. Waxay u furan tahay daaqad edbin ah si aad ugu qori karto sawirka iyada oo la isticmaalayo fursado badan oo loogu talagalay qalimaanta, midabada madow, iyo beerista. Markaad sameysid, waxaad wadaagi kartaa sawirka ama u kaydin kartaa qalabkaaga.
Xulasho Xul u yeelo Abuurista GIF-yada Wareer leh
Haddii aad tahay taageere ka mid ah GIF-yada lagu ciyaaro , ka dibna Smart Select waa awooda aad jeclaan doonto.
Xulo Xulashada Xulashada Ammaanka Hawada laga bilaabo shaashad kasta si aad u qabato qayb ka mid ah bogga sida leydi, lasso, oval, ama animation. Dooro ikhtiyaarka aad rabto, laakiin animation-ka wuxuu la shaqeeyaa kaliya fiidiyowga.
Markaad dhammaysato, waad kaydin kartaa ama wadaagi kartaa qabashadaada, iyo dhammaadka barnaamijka waa mid sahlan sida riixaya X ee geeska sare.
Samsung S Pen oo ah More iyo More iyo More
Waxaa jira waxyaabo aad u badan oo aad sameyn karto Samsung S Pen. Waxaad si toos ah ugu qori kartaa codsi adiga oo dooranaya qalinka xulashada dukumeentiga. Oo waxaa jira daraasado badan oo barnaamijyo waaweyn ah kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad noqoto mid wax soo saar ama hal abuur leh S Pen sida aad jeceshahay. Wax walba oo ka soo jeeda joornaalada si ay u midoobaan buugaagta, iyo wax badan oo kale.
Ku Faraxsanyihiin Samsung S Pen
Xuduudaha waxa aad sameyn kartid Samsung S Pen waa kuwo aan dhammaad lahayn. Iyo barnaamijyada cusub waxaa loo soo bandhigaa maalin kasta si ay uga faa'iidaystaan ​​awooda S Pen. Sidaa daraadeed, ha furo, oo waxoogaa madadaalo leh leh qalinka dhismaha.
Daboolka Wareegga Gawaarida ee HTC, Batariga iyo Tababaraha SIM Card
Sida NFC looga dhigo Android-ka
Sidee loo qaadaa Screenshot on Your Android Phone ama Tablet
Hawlaha: Waa Maxay & Sida loo Isticmaali karo
Sida loo Isticmaalo Mashruucyada Quick Quick Menu on Android
Soo saarida labada xidhmood ee HTC Inspire 4G
Helitaanka Badbaadada Batroolka ee Maktabaddaada
Hordhac Sawirada Macro
Sida loo abuuro Liiska Play Goista ee iPod
Isku-dhajinta Nambarada Ku qoran Google Spreadsheets
Badbaadi Lacageed adigoo Taabanaya App In-App iibsiga on your iPhone
SID Display Week Week 2014 - Warbixinta iyo Sawirrada
Dib u eegida Geelle, oo loo isticmaalo iPhone & iPod iibiyaha / iibiyaha
Miyuu Websitkaagu ka shaqeeyaa muraayadaha la taaban karo?
5 Abaabulayaasha Database ee ugu fiican ee bilaashka ah
Baro Command Linux - waa kuwee
Ku samee xakameynta waalidnimada Macmalkaaga
Waa maxay Flash Drive?
MartinLogan Motion AFX Dolby Atmos Wadahadalada u qaabilsan
Naadiga Sam ee Naadiga Kubadda Cagta ee Rabshadaha Jimcaha
Warbixinta Speedtest.net Website
Sida Loo Doorto Luqad Luqad Kala duwan ee Muuqaalka Muuqaalka
The Best Smartwatches leh Bandhigyada Bandhigyada
Texturing, Surfacing, iyo UV Map Generation Software